Semalt विशेषज्ञ:4प्रकार अनलाइन अपराध जुन तपाईं आज सामना गर्न सक्नुहुन्छ
इन्टरनेटले धेरै कम्प्युटरहरू लि link्क गर्न जारी राख्दै, ह्याकरहरू र अन्य साइबर अपराधीहरूले उनीहरूको आवश्यकताहरू कार्यान्वयन गर्न नयाँ प्रविधिको निर्माण गर्न जारी राख्छन्। उपकरणहरू जुन ह्याकरहरूले प्रयोग गर्दछ राम्रो टेक्नोलोजी प्रगतिको रूपमा राख्दछन्। जब हामी वेबसाइटहरू बनाउँदछौं, हामी वास्तवमै थोरै विचार गर्छौं कि एक ह्याकरले कम्प्युटर प्रणालीबाट धेरै मूल्यवान जानकारी लिन सक्दछ। नतिजाको रूपमा, तपाईंको e-वाणिज्य वेबसाइट को सुरक्षा र तपाईंको ग्राहकहरूको सुरक्षा व्यवस्थापकमा धेरै निर्भर गर्दछ।
यी केसहरूबाट टाढा रहनका लागि तपाईको अनलाइन र कम्प्युटर अनुप्रयोगहरूमा केहि विशेष उपायहरू समावेश गर्नु सँधै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले रोस बार्बर, Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक, कम्प्युटर सम्बन्धित ठगी को सबैभन्दा लोकप्रिय प्रकार निर्दिष्ट गरिएको छ:
यो अपराधले नक्कली वा क्लोन गरिएको वेब पृष्ठहरूको प्रयोगमा संलग्न गर्दछ। उद्देश्यका पछाडि ह्याकर वा साइबर क्रिमिनलले पृष्ठहरू सिर्जना गर्न सक्दछ जुन कुनै खास वेब फारम वा साइन इन फारमको समान हो। यस च्यानललाई पछ्याउँदै, स्क्यामरले पीडितहरूलाई ती लिंकहरूमा क्लिक गर्नका लागि तरिकाहरू खोज्दछ। यो प्रविधी विशेष रूपमा पासवर्ड र क्रेडिट कार्ड जानकारी जस्ता व्यक्तिगत जानकारी चोर्न महत्वपूर्ण छ।
ह्याकि सब भन्दा पुरानो इन्टर्नेट फ्रड केस मध्ये एक हो। ह्याकिमा कम्प्युटर प्रणालीमा अवैध प्रवेश समावेश छ र प्रणालीमा केही विशिष्ट अवैध गतिविधिहरू प्रदर्शन गर्दछ। सबै ह्याकि cases का धेरै जसो ह्याकहरू खेल्ने व्यक्तिको पछाडि बिरामी मनसाय समावेश हुन्छ। ह्याकिले प्राय जसो सामूहिक अपराधहरू र घोटालाहरूलाई सहयोग गर्दछ। उदाहरण को लागी, ह्याकरहरु को लागी बिभिन्न अक्षरहरु मा फरक बैंक लगिनहरु को लागी पहुँच प्राप्त गर्न सक्छ। यी लगइनहरू डार्क वेबमा विकासोन्मुख देशहरूमा व्यक्तिहरूको लागि उपलब्ध हुन सक्छन् जसले ट्रेस बिना पैसा हस्तान्तरण गर्छन्।
Ent. पहिचान चोरी
व्यक्तिगत जानकारी धेरै छिटो कम्प्युटर प्रणाली मार्फत चुहावट गर्न सक्दछ। उदाहरण को लागी, ह्याकर्स SQL Injection जस्तै साधारण प्रविधि प्रयोग गर्न सक्दछन् र डाटाबेसमा प्रवेश प्राप्त गर्न सक्छन् जुन प्रासंगिक ग्राहक जानकारीले भरिएको छ। नतिजाको रूपमा, ह्याकरले असुरक्षित वेब सर्भरमा फाइलहरू परिमार्जन, अपलोड, डाउनलोड वा मेटाउन सक्दछ। यसका अलावा, ह्याकरले केहि गैरकानूनी कार्यहरू पनि गर्न सक्छ जस्तै अन्य इन्टरनेट जालसाजी गतिविधिहरूमा प्रयोगको लागि व्यक्तिगत जानकारी चोर्न।
Websites. वेबसाईटहरुको क्लोनिंग
केहि साइबर अपराधीहरूले आफ्नो सीप स्पामिंगबाट टाढा राख्छन्। उदाहरण को लागी, केहि केसहरु छन् जहाँ ह्याकरहरु वेबसाइट बनाउँदछ जुन अर्को साइटको नक्कल हो। यस चालको पछाडिको मानक अभिप्रायले कमजोर व्यक्तिलाई आक्रमण गर्न केही आवश्यकता समावेश गर्न सक्दछ। अन्य केसहरूमा, तिनीहरूले मानिसहरूलाई उनीहरूको केही क्लोन गरिएको स्टोर पृष्ठहरूमा किनमेल गर्न छल गर्छन्, तिनीहरूबाट धेरै पैसा चोर्नका लागि। अन्य अवस्थाहरूमा, व्यक्तिगत जानकारी पनि यस तरीकाले ह्याकरहरूमा लीक हुन सक्छ।
कम्प्युटर प्रणालीको प्रगति पछि इन्टरनेट जालसाजीका घटनाहरू बढ्दो छ। त्यहाँ धेरै केसहरू छन् जसमा सम्झौतापूर्ण स्थितिमा व्यक्तिहरूको साइबर सुरक्षा कार्यहरू गर्नु समावेश छ। यी सबै केसहरूमा हैकर्स र स्क्यामर जस्ता व्यक्तिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। प्रकारहरू र कम्प्युटर धोखाधडी को ज्ञान एक प्रणाली संचालित तरीका लाभदायक हुन सक्छ। अन्य केसहरूमा, कम्प्युटर धोखाधडीले आधार बनाउँदछ जसको माध्यमबाट व्यक्तिले फ्याक्सिंगमा ह्याकहरू फेला पार्न र स्वचालित गर्न सक्छ। यो गाइडले वेब प्रशासक वा ब्लगरलाई पूर्ण ह्याकि forको लागि माग्ने उपायहरूको सुरक्षा बढाउन मद्दत गर्दछ।